FANDANIANA NY PL 001/2020 : Nolavin’ny HCC ny fitoriana nataon’ny senatera 19 – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:14
Nandamoaka ny fitoriana napetrak'ireto senatera ireto teny amin'ny HCC
Accueil/Politika/FANDANIANA NY PL 001/2020 : Nolavin’ny HCC ny fitoriana nataon’ny senatera 19
Tampina tanteraka ny daomy ho an’ireo Senatera 19 avy amin’ny antoko mpanohitra, ahitana ny HVM sy ny TIM tamin’ny fikasana hanameloka ny fomba nandaniana ilay volavolan-dalàna laharana 001/2020. Omaly, namoaka ny fanapahana ny HCC, izay nilaza fa mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana ny nandaniana izany, ary tsy nitombina ny fitoriana napetraky ireto Senatera ireto.
Lucien R. 2 octobre 2020
Araka ny fanapahana navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) laharana faha-16-HCC/D3, omaly, momba ny fitoriana ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fepetra narahina mahakasika ny “texte à valeur legislative” araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-118 ny Lalampanorenana, nataon’ny Senatera 19. Azo raisina fa tsy mitombina, hoy ny HCC, ity fitoriana ity. Ary nohamafisin’ny avy etsy Ambohidahy fa tsy nisy fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana mihitsy ny “procedure” rehetra narahina. Raha tsiahivina, ny 07 Septambra 2020 no nametraka taratasy fitoriana teny anivon’ny HCC ireto andiana Loholona ireto noho ny filazan’izy ireo fa hoe nisy tsy fanarahan-dalàna nataon’ny Fitondram-panjakana tamin’ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ilay volavola-dalàna laharana faha 001/2020. Nambaran’ ny Loholon’i Madagasikara Mamitiana Fabergé tamin’izany, fa nanomboka tamin’ny famoahana ny vokatry ny fivorian’ireo vaomiera iraisana isasahana dia efa nisy ny tsy fanarahan-dalàna izay nolazainy fa I Madagasikara dia bicameral ka ny tatitra izay noentina tany amin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta dia tokony tatitra voasonian’ny Filohan’ny parlemanta roa tonta. Notsipahin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana anefa izany, izay nilazan’ny HCC fa fitoriana tsy mitombina.
Tsy nisy fandikàn-dalàna mihitsy
Hitsivolana telo no tao anatin’ity volavolan-dalàna laharana 001/2020 ity, izay efa nivadika ho lalàna laharana 2020-012, tamin’ny 01 Septambra 2020. Nilaza ny teo anivon’ny HCC fa efa nandalo ny fitsirihana ny fifanarahany tamin’ny Lalàmpanorenana io lalàna io, ary efa nekena izany, araka ny fanapahana laharana 15-HCC/D3 tamin’ny 4 Septambra 2020. Tsy nisy mihitsy, hoy ny HCC, fandikàna izay voalazan’ny tao anatin’ny andininy faha-96, 117, 118 ao amin’ny Lalàmpanorenana. Ity andininy faha-96 ity, raha tsiahivina no anisany tena nitondran’ny mpanohitra fanakianana mafy izay nolazain’izy ireo fa tsy voahaja. Araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-96 ao amin’ny Lalampanorenana, “…Raha toa ka tsy afaka mandany rijan-teny tokana iombonana ny vaomiera na tsy nolaniana araka ireo fepetra voalaza ao amin’ny andalana etsy aloha ilay rijan-teny, dia ny
Antenimierampirenena, amin’ny alalan’ny latsabato iandanian’ny antsasa-manilan’ny
mpikambana ao aminy no manapa-kevitra farany”. Nanaraka izay voalazan’io andininy io tanteraka, noho izany, ny endrika nandaniana ilay volavolan-dalàna laharana 001/2020, nananganana ilay vaomiera ikambanana isasahany farany teo. Niaraha-nahita ny zava-nisy nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana. Tsy nitovy hevitra ary tsy nahita marimaritra iraisana ny antenimiera roa tonta. Ny Antenimerampirenena, noho izany, no niroso tamin’ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity, ary lany soamatsara.
FIATREHANA NY ADY LEHIBE : Tanora malagasy analiny niady ho an’ny fahafahana
ASA FAMPANDROSOANA : Hahazo 400 tapitrisa dolara avy amin’ny Banky Iraisampirenena isika